कुन जनावर उफ्रिन सक्दैन? के तपाईंलाइ थाहा छ, छैन भने हेर्नुहोस | Khabar Sadan खबर सदन
Home अन्य कुन जनावर उफ्रिन सक्दैन? के तपाईंलाइ थाहा छ, छैन भने हेर्नुहोस
कुन जनावर उफ्रिन सक्दैन? हेर्नुहोस यो जनवार हो।
हात्तीहरू केवल स्तनपायी जन्तुहरू उफ्रिन सक्दैनन् । यो सत्य हो कि वयस्क हात्तीहरू उफ्रिदैन। तर त्यहाँ अन्य स्तनपायीहरू पनि किन्न सक्दैनन्, जस्तै स्लथ्स, हिप्पोस र गैन्डोहरू। यद्यपि, हात्तीहरू जस्तो नभई, हिप्पोस र गैन्डोसँग चारै फिट मैदानबाट एकै पट्टि जान सक्छ जब तिनीहरू दौडन्छन्।
यद्यपि उनीहरूले तिनीहरूको पिण्डबाट पिउन प्रयोग गर्छन्, तर पानी सबै माथि जाने छैन। यसको सट्टामा, तिनीहरूले ट्रंकको माथिबाट पानीको भाग चूस्नेछन् र उनीहरूको मुखमा हालिदिनेछन्। हात्तीहरू दैनिक १५० र २५० लिटरको बीचमा पानी पिउँछन्।
Previous articleअब सरकारले निषेधाज्ञाका लागि दिएको छुट बन्द गर्ने, किन फेरि बन्दा गर्ने
Next articleएउटै परिवारका तीनको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको